Onye na -emepụta ihe na ndị na -ebubata akụkụ akụkụ CCMIE
Ọrụ: ijikwa igbe mbupu na ibu ndị ọzọ site na/gaa gwongworo ndị ọzọ
Ụgbọ njem: igbe 20ft, 40ft
Axle: axle 3, 13T Fuwa
Ngwongwo ọdịda: ika JOST
Sistemụ breeki: WABCO
CCMIE 45T tọn Container Side Loader Trailer ka emere na Xuzhou, emepụtara ihe nlereanya a kemgbe afọ 2019, ejiri ya nwee akara ama ama na -enweghị eriri na njikwa aka. CCMIE na -ewepụta trailer iri anọ na anọ nke ihe eji ebu ihe maka ibudata na ibudata ya. Ọ nwere ike buo ma budata akpa 40ft, akpa 20ft nwere ikike ibuli tọn 45.
CCMIE 20ft 40ft 40ft akpa ụgbọala na -adọkpụ ụgbọala nwere ikike na -ebuli elu na akụrụngwa na -ebuli ihe na -arụ ọrụ nke ọma. CCMIE na -enye ngwongwo akụkụ 40ft akpa iji gboo mkpa njikwa arịa niile, ibuga akpa 20ft, 40ft 40HQ.
Ihe mkpuchi akụkụ CCMIE emeela ka ọrụ gbanwee, ịchekwa oge ma melite arụpụta ihe maka ndị ahịa nwere afọ ojuju gburugburu ụwa. CCMIE na -ewepụta ụgbọala na -adọkpụ akụkụ akpa maka ibuli na ibufe arịa. Anyị na -ejikwa teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya, dị irè ma dịkwa nchebe.
Maka usoro okpokolo agba, ihe ndị na-arụ ọrụ ịgbado ọkụ na-eji nchara na-eguzogide ọgwụ dị elu, CCMIE na-ebukwa akụkụ ụgbọ mmiri na-eburu ọkara trailers na-ewere echiche dị elu.
Anyị na CCMIE na-enye ndị ahịa anyị nwere ike zụta ahịa sitere n'akụkụ ụwa niile ezigbo ndị na-ebuli akụkụ akụkụ na ndị na-ebubata akụkụ nke mbụ. N'ịghọ onye nrụpụta ọkachamara na ngalaba a, anyị enwetala ahụmịhe bara ụba nke ukwuu na mmepụta na njikwa nke ihe na-adọkpụ China Side lifter Container Trailer 40 Foot Side Lift Container Trailer for Sale, wee nweta ezigbo ihe ọmụma ọkachamara, anyị kwenyere na nke a. na -eme ka anyị pụọ iche n'asọmpi a ma na -enye ndị ahịa ohere ịhọrọ ma tụkwasị anyị obi. Anyị niile na-atụ anya imepụta ndị ahịa anyị mmeri-mmeri, yabụ kpọọ anyị taa wee mee ndị enyi ọhụrụ!
Onye na-ebuli akụkụ akụkụ China kacha ere ahịa, Onye na-eburu akụkụ, ruo ọtụtụ afọ, anyị na-agbaso ụkpụrụ nke ndị ahịa, dabere na mma, ịchụso ịdị mma na uru ibe. Anyị na -atụ anya na, site n'ezi obi ọma na ihu ọma, anyị ga -asọpụrụ inyere gị aka n'ahịa ọzọ.
lelee sistemụ hydraulic n'akụkụ ọ bụla
Dị elu ọrụ valvụ elu
Debe mmanụ hydraulic na -enweghị ájá, jupụta mmanụ hydraulic kwa ọnwa 4 ruo 6., dochie ya ma ọ bụrụ na ị hụ na ọ bụ ọgba aghara, ihe ruru unyi wdg na -adịghị ahụkebe, yana tank mmanụ dị ọcha, dochie mmanụ hydraulic kwa afọ.
Lelee akwa maka paịlị slide, dochie ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Lelee ọkwa mmanụ hydraulic kwa ụbọchị, tinye ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Lelee pipeline hydraulic, njikọ tube na cylinder, ma ọ bụrụ na mmanụ na -eri nri, mee ka nkwonkwo sie ike ma ọ bụ dochie akàrà ma ọ bụrụ na achọpụtara mmanụ
Dị ọcha ma ọ bụ dochie ihe nzacha mmanụ hydraulic dị elu ma weghachite nzacha mmanụ kwa ọnwa 6, wepu nkwụnye mmanụ, kpochapụ mmanụ, wee wepụ shei, hichaa ma ọ bụ dochie nza
Nke gara aga: Akụkụ ebuli kreenu
Osote: Trailer Side Loader